Teny tsara indrindra avy amin'i John Magufuli - Victor Mochere
John Pombe Joseph Magufuli no Filohan'i Tanzania fahadimy, nanompo nanomboka tamin'ny 2015 ka hatramin'ny nahafatesany tamin'ny 2021. Izy no minisitry ny Asa, ny Fitaterana ary ny Serasera nanomboka ny taona 2000 ka hatramin'ny 2005 ary 2010 ka hatramin'ny 2015 ary filohan'ny Vondrom-piarahamonin'ny Fampandrosoana Afrikana Tatsimo nanomboka ny taona 2019 ka hatramin'ny 2020. 1995. Voafidy voalohany ho solombavambahoaka tamin'ny 1995 izy ary niasa tao amin'ny Kabinetran'i Tanzania ho Minisitry ny Asa lefitra nanomboka tamin'ny 2000 ka hatramin'ny XNUMX.
Avy eo izy dia minisitry ny asa tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny 2005, minisitry ny fanajariana ny tany sy ny fonenan'ny olombelona nanomboka ny taona 2006 ka hatramin'ny 2008, minisitry ny fiompiana sy ny jono nanomboka ny taona 2008 ka hatramin'ny 2010, ary minisitry ny asa fanindroany nanomboka ny taona 2010 ka hatramin'ny 2015. Kandidà Chama Cha Mapinduzi (CCM), antoko manjaka ao amin'ny firenena, Magufuli no nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny Oktobra 2015 ary nanao fianianana tamin'ny 5 Novambra 2015; voafidy indray izy tamin'ny taona 2020.
Nihazakazaka teo amin'ny sehatra fampihenana ny kolikoly sy ny fandaniam-bolan'ny governemanta izy sady nampiasa vola tao amin'ny indostrian'i Tanzania, saingy nanana fironana autokratika ny fitondrany, araka ny hita amin'ny fameperana ny fahalalahana miteny, ny famerana ny zon'ny LGBT, ary ny famoretana ny mpikambana ao amin'ny mpanohitra ara-politika sy sivily. vondron’olona. Teo ambany fiadidiany, niaina ny iray amin'ireo fitomboana ara-toekarena matanjaka indrindra ao amin'ny kaontinanta i Tanzania (6% amin'ny salan'isa isan-taona) ary nifindra avy amin'ny sokajin'ny firenena ambany fidiram-bola mankany amin'ny firenena antonony.
Mifanohitra amin'ny mpitondra any an-kafa eran'izao tontolo izao, nandidy ny fitiliana COVID-19 i Magufuli mba hampitsahatra sy hanohitra ny antso hampihatra ny fepetra momba ny fahasalamam-bahoaka mandritra ny areti-mifindra COVID-19 any Tanzania. Naneho ny tsy fahatokisany ny vaksiny novolavolain'i Etazonia sy Eoropeana ihany koa izy, naleony niantehitra tamin'ny finoana hiarovana ny fireneny. Ny fomba fiasan'i Magufuli dia naseho ho toy ny fandavana COVID-19. Ny fahafatesany tamin'ny 17 martsa 2021 dia nambaran'ny governemanta ho olana fo efa hatry ny ela.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i John Magufuli dia voatanisa etsy ambany.
“Tsy ho tafavoaka velona ao amin'ny vatan'i Kristy ny Coronavirus fa ho may. Izany indrindra no nahatonga ahy tsy nikoropaka rehefa nandray ny Kôminio Masina. – John Magufuli
"Ny Coronavirus, izay devoly, dia tsy afaka miaina ao amin'ny vatan'i Kristy… Hirehitra avy hatrany izany." – John Magufuli
“Tsy hitako izay ilana fandrindram-piterahana any Tanzania.” – John Magufuli
“Fantatro fa hitaraina amin'ny fanamarihako ireo tia manakana ny ovaire. Alefaso ny ovaireo, avelao izy ireo hanakana ny azy.” – John Magufuli
“Te hisaotra ny Tanzaniana avy amin'ny finoana rehetra aho. Nivavaka sy nifady hanina ho an'Andriamanitra isika mba hanavotra antsika amin'ny areti-mifindra izay mampahory ny firenentsika sy izao tontolo izao. Fa namaly anay Andriamanitra. Mino aho, ary azoko antoka fa maro ny Tanzaniana no mino fa naringan’Andriamanitra ny aretina corona.” – John Magufuli
“Tiako hino ianareo Tanzaniana fa manana filoha tena izy, tena vatolampy. Tsy azo atahorana aho ary tsy atahorana.” – John Magufuli
“Te hilaza amin'ny tompon'ny haino aman-jery aho - mitandrema, jereo izany. Raha heverinao fa manana izany karazana fahalalahana izany ianao, dia tsy ho amin’izany.” – John Magufuli
“Milaza amin’ny mpitondra fanjakana izay kamo sy manao tsirambina aho mba hiomana. Naharitra ela izy ireo. Izao no farany.” – John Magufuli
"Raha manjaka ny fahendrena, dia handalo izany toe-javatra izany amin'ny fomba milamina isika." – John Magufuli
"Any amin'ny firenena iray, ny zanany vavy - latsaky ny 14 taona - dia natao vakisiny tamin'ny lazaina ho homamiadan'ny vozon-tranonjaza, saingy nipoitra taty aoriana fa natao hahatonga azy ireo tsy hiteraka ilay vaksiny." – John Magufuli
“Azo inoana fa fisedrana hafa izany fa miaraka amin’Andriamanitra isika no handresy. Aoka isika tsy hifampitahotra fa tsy haharesy… Andriamanitra tsy afaka mandao ity firenena ity”. – John Magufuli
“Fotoana izao hiray hina sy hanilika ny fahasamihafan'ny foto-pisainantsika, hiasa mafy ho an'ny Tanzaniana rehetra aho na inona na inona firazanany, na ara-pivavahana na ara-poto-piainany.” – John Magufuli
"Ny governemantako dia hanantitrantitra ny ady amin'ny kolikoly, ny famoronana asa ary ny indostria." – John Magufuli
“Tsy misy mpianatra bevohoka mahazo miverina mianatra… Rehefa bevohoka ianao dia vita.” – John Magufuli
“Indray andro dia hahatsiaro ahy ianao… Fantatro fa indray andro any dia hahatsiaro ahy ianao, tsy noho ny zava-dratsy fa noho ny asa tsara… satria nanao sorona ny aiko ho an'ny mahantra ao Tanzania aho.” – John Magufuli
“Ny rain'ny mpanorina anay [Julius Nyerere] dia tsy olona tokony holazaina amin'izay tokony hatao… Efa zatra manao ireny toromarika nolavin'ny rain'ny mpanorina anay ireny ireo izay mamolavola fitsipika [fahidiana] toy ireny.” – John Magufuli
“Zava-bozaka ny tranonay ary toy ny ankizilahy maro, nasaina niandry omby sy nivarotra ronono sy trondro hamelomana ny fianakaviako aho, dia fantatro ny dikan’ny hoe mahantra. Hiezaka aho hanampy amin’ny fanatsarana ny fiahiana ny vahoaka”. – John Magufuli
“Imbetsaka aho no nanantitrantitra fa tsy izay rehetra omena anao no tsara. Mety misy olona ampiasaina, azo ampiasaina izany fitaovana izany… saingy mety ho sabotage ihany koa izany satria ady izany.” – John Magufuli
“Eto ny CCM ary mbola ho eto – mandrakizay. Ry mpikambana ao amin'ny CCM, afaka mandeha miaraka amin'ny lohanareo ambony ianareo. Tsy misy hafa afa-tsy ny CCM. ” – John Magufuli
“Tokony ho fantatry ny minisiteran'ny Fahasalamana fa tsy ny vaksiny rehetra no misy dikany ho an'ny firenentsika. Tsy maintsy mitadidy ny Tanzaniana mba tsy hampiasaina amin'ny fitsapana ny vaksiny mampiahiahy izay mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fahasalamantsika. ” – John Magufuli
“Tokony hitandrina ny minisiteran’ny Fahasalamana, tsy tokony ho maika hanandrana ireny vaksiny ireny raha tsy manao fikarohana, fa tsy ny vaksiny rehetra no zava-dehibe amintsika, tokony ho mailo isika. Tsy tokony hatao ho ‘kisoa ginea’ isika.” – John Magufuli
“Ny zavatra mampifaly anao amin'ny fanampian'izy ireo [Shina] dia tsy misy ifandraisany amin'ny fepetra rehetra izany. Rehefa manapa-kevitra ny hanome anao izy ireo dia manome anao fotsiny. Nanampy anay teo amin'ny sehatra fampandrosoana maro hafa izy ireo. " – John Magufuli
“Ny fomba hitsaboana ny vay dia ny manindrona azy, ary nataoko ho andraikitro ny manao izany. Fantatro fa maharary ny mipoitra vay, saingy indrisy fa tsy misy fomba roa momba izany. " – John Magufuli
“Ireo toerana masina ireo dia misy an’Andriamanitra. Ry Tanzaniana, aoka isika tsy hatahotra ny handeha hidera Azy.” – John Magufuli
“Kamo ireo manao fandrindram-pianakaviana… matahotra ny tsy hahavelona ny zanany. Tsy te hiasa mafy hamelomana fianakaviana maro izy ireo ka izany no antony nisafidy ny hanao fandrindram-piterahana ka miteraka iray na roa ihany no hiafarany.” – John Magufuli
"Efa nivavaka sy nifady hanina tamin'Andriamanitra izahay mba hamonjy anay amin'ny areti-mifindra… ary azoko antoka fa maro ny Tanzaniana no mino fa naringan'Andriamanitra ny aretina corona." – John Magufuli
“Nahitana aretina virosy maromaro izahay, anisan'izany ny SIDA sy ny kitrotro. Ny toekarentsika no tsy maintsy atao aloha. Tsy tokony hatory izany… Tsy maintsy mitohy ny fiainana… Ho avy eto hividy sakafo ireo firenena [any an-toeran-kafa] any Afrika amin'ny taona ho avy… hijaly izy ireo noho ny fanakatonana ny toekareny.” – John Magufuli
“Efa niaina nandritra ny herintaona mahery izahay tsy nisy otrikaretina satria mahay ny Andriamanitsika ary hahomby foana i Satana. Tokony ho mailo ny minisiteran'ny Fahasalamana, ary hialana amin'ny fakam-panahy hanova antsika ho firenena izay anaovana an-kalalahana ny fanaovana vaksiny.” – John Magufuli
"Mila mitandrina isika satria ny sasany amin'ireo fanomezana ireo hiadiana amin'ny coronavirus dia azo ampiasaina amin'ny fampitana ny viriosy. Te-hanentana anareo Tanzaniana aho mba tsy hanaiky fanomezana saron-tava, fa lazao amin'ireo mpamatsy vola mba handeha hampiasa izany amin'ny vady aman-janany. ” – John Magufuli
“Rehefa be mponina ianao dia manangana ny toe-karena. Izany no mahatonga ny toekaren'i Shina ho goavana be”. – John Magufuli
"Tsy afaka miresaka momba ny fiarovana ny tontolo iainana ianao raha miankina amin'ny saribao na hazo ny ankamaroan'ny mponina amin'ny angovo azony." – John Magufuli
“Tokony hijoro tsara ianao. Mampidi-doza ny fanaovana vaksiny. Raha afaka nanao vaksiny ilay fotsy hoditra dia tokony efa nahita vaksiny ho an'ny SIDA izy izao; efa nahita vaksiny ny raboka izy izao; efa nahita vaksiny ho an'ny tazomoka izy izao; efa nahita vaksiny ho an'ny homamiadana izy amin'izao fotoana izao." – John Magufuli
Ny vokatry ny CBD gummies amin'ny hozatra